अन्तत फर्किए निधि ,कसले फकायो निधिलाई ? - Hamro Kalam
अबको देशको आर्थिक समृद्धि नै एक मात्र लक्ष्यः प्रचण्ड
Home Bannernews अन्तत फर्किए निधि ,कसले फकायो निधिलाई ?
अन्तत फर्किए निधि ,कसले फकायो निधिलाई ?
काठमाडौं – राजीनामा दिएर पार्टी सभापति र अन्य नेताको पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेका निधिलाई पूर्वमन्त्री तथा काँग्रेस नेता एनपी साउँदले बुधबार विहान १० बजे मन्त्री निवाशमै गएर भेटेका थिए ।
साउँद र निधिबीच करिब डेढ घन्टा छलफल भएपछि साउँदले नै टेलिफोनमार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गराएका थिए ।
सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने नेता साउँदले निधिलाई सभापतिसँग कुरा गराएपछि उनी प्रत्यक्ष रुपमा सभापतिसँग कुरा गर्न सहमत भएको साउँद निकट स्रोतले बतायो ।
त्यसपछि बुधबार बेलुकी ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म सानेपामा सभापति देउवा र निधिबीच वान टु वान वार्ता भएको थियो । देउवाले निर्वाचनको १० दिन अगाडि अर्को गृहमन्त्री ल्याउँदा कसैलाई पनि फाइदा नहुने बताएपछि उनी राजीनामा फिर्ता लिन राजी भएको बताइएको थियो ।
निधिलाई राजीनामा फिर्ता लिएर मन्त्रालय सम्हाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार बिहान देउवा, दाहाल र निधिबीच भएको छलफलपछि उनी राजीनामा फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।निधिले राजीनामा फिर्ता लिएपछि महाअभियोगको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी र अन्य क्षेत्रबाट पार्टीमाथि भएको आक्रमण केही कम हुने काँग्रेसीहरुको अनुमान छ ।
राजीनामा फिर्ता लिएका गृहमन्त्री निधि आजै जनकपुरमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम छ ।
निधिको राजिनामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरिसकेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै दिन वैशाख १७ गते कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका निधीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधी सरकारको बरियतामा दोस्रो स्थानमा रहनेछन् ।यसअघि निधी र तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाबीच वरियता विवाद चलेको थियो । थापालाई दोस्रो वरियता दिएपछि उनले मन्त्रिपरिषद् बहिस्कार समेत गरेका थिए । तर, राप्रपाले सरकार छाडेकाले अब निधी प्रचण्ड सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहनेछन् ।
‘न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदका व्यक्तिहरू पार्टी अफिस धाउन मिल्छ ?’
ओलीको प्रस्ताव मानेनन प्रचण्डले, महाअभियोग शुक्रबार संसद्‌मा जाने,